သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Instagram ကိုရောင်းရန်အကြံဥာဏ်များ➡️➡️နောက်လိုက်များ▷➡️
ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 20180မှတ်ချက်များ 1350
နညျးလမျးမြားကိုသင်ရောင်းဖို့ Instagram ကိုအသုံးပွုနိုငျ
သင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းအားပြုပြင်ခြင်း တိုက်ရိုက်အရောင်းအဘို့အ Instagram ကို ကြီးမားသောဆုလာဘ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ဤဆောင်းပါးကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ Instagram ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင့်ရဲ့ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် Instagram အကောင့် တစ်ခုဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းပါ။
El Instagram ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင့်ရဲ့ website နှင့်တစ်လလျှင်လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်အသွားအလာတိုးပွားစေပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, Instagram ကိုဒါအစွမ်းထက်ပါ!
ထိုအခါငါသည်သင်တို့ကို Instagram ကိုများအတွက်ရောင်းဖို့သင့်လုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များပေး။
ပရိသတ်ကိုသင်ဘာလုပ်စေချင်သလဲဆိုတာကိုပြောတာထက်ပိုမြန်တာကသင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖုန်းခေါ်သည်။ ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ အချိန်ကစမ်းသပ်ပြီးပြီ။ အလျင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကမှာပရိသတ်ကိုသူတို့ကိုဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာပြရမယ်။ ပြီးရင်အဲဒီအကူအညီကိုဘယ်မှာသွားရမလဲဆိုတာသူတို့ကိုချက်ချင်းပြောပြပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ ပရိသတ်သည်“ ဖြောင့်ချက်ကျသော” နည်းဗျူဟာကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကပထမဦးဆုံးလက်ကနေ, Instagram ကိုဤအမှု၌ထူးခြားသောတစ်လူမှုကွန်ရက်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Instagram ကိုအပေါ်တစ်ဦးကပုံမှန်လူတစ်ဦးတစ်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါဖော်ပြချက်စစ်ဆေးအရေးယူဖို့ခေါ်ဆိုခအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ရိုးရှင်းတဲ့။ အနိုင်ရမှ Instagram ကိုရောင်းအား သင် "နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ပရိုဖိုင်းရှိ link ကိုနှိပ်ပါ" ဟူသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသင်ခေါ်သင့်သည်။
အတွေ့အကြုံကနေအခါအရေးယူမှုမှခေါ်ဆိုမှုအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကမ်းလှမ်းမှုကို precedes, ပိုပြီးဆောင်ရ.
ဒါဟာညာဘက်, အံ့သြဖွယ်အသံ? ကောင်းပြီသောအရာကိုမှန်းဆ? ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်။
သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးမှထွက်ရှိအရေးယူပိုင်ခွင့် images နဲ့ဖုန်းခေါ်ချပြီးနှင့်အတူစတင်သည်။ ဤအစွန်အဖျား #2စေပါတယ်။
ဖောက်သည်ဦးစားပေးဖို့အယူခံသောရုပ်ပုံများကို Instagram ကိုခြေလှမ်းမှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်အရေးကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
, Find ရည်ရွယ်ကြောင့်အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သငျ့ပရိသတျမှသက်ဆိုင်ရာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ထိုအသင်ဤပလက်ဖောင်းကနေမြင့်မားတဲ့ဝင်ငွေရလျှင်။
သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကို၏ဦးစားပေးမယ့်ဧရာမခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆန်းစစ်ပါ။ ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များဆန္ဒရှိပရိသတ်ကိုမှမှားအကြောင်းအရာ posted သည့်အခါမည်သို့ဖြစ်ပျက်မြင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးမဟုတ်ပါဘူးဆင့်ဆိုရမည်မှာ,
ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုရဲ့ ဦး စားပေးအချို့ကိုနားလည်မှုနှင့်အတူဒီဖတ်နေနေကြသည်။ ဒီတော့ဒါကရိုးရှင်းသင့်တယ် သင်၏ Instagram feed ကိုပြန်ကြည့်ရှု။ လူကြိုက်များသောပို့စ်များကိုကြည့်ပါ။ ဘာမှတ်ချက်များ၊ ဝေစုများနှင့်နှစ်သက်သည်ကိုသင်ရရှိခဲ့သနည်း။ သင်၏ပရိသတ်သည်သင်ကဲ့သို့သောအရသာနှင့် ဦး စားပေးမှုများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ Instagram post တစ်ခုချင်းစီမှ "ဒီပုံကကျွန်မရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်မလား" ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့စတင်ပါ။ "မင်းဒီဝယ်မလား?" သင်၏အဖြေသည်ဟုတ်ကဲ့လျှင်၊ သင်သည်များစွာသောအကြောင်းအရာကိုတွေ့ပြီ
အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့စာမကျြနှာကိုသွားစဉ်းစားပါ။ သူတို့ရဲ့လူကြိုက်များမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုထွက်စစ်ဆေးပါ။ သင်သည်သင်၏နယ်ပယ်ပရိသတ်ကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောပုံများကိုတွေ့ပါအတိုင်း, သင်တို့၏စာမျက်နှာဆင်တူပုံရိပ်တွေဖန်တီးပါ။
သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ရဲ့ဦးစားပေးထူထောင်ခဲ့ကြပြီးတာနဲ့ကအစွန်အဖျား #3ပြောင်းရွှေ့ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးကိုကိုယ်စားပြုသည့်အခါသင့်ရဲ့ Instagram ကိုငွေရှာခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာကန့်သတ်ရှိနေဆဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု။ များစွာသောတိုက်ရိုက်ရောင်းချသောကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများအားကြော်ငြာနေရာမယူရန်ခွင့်မပြုပါ။ သင်၏တွဲဖက်အသင်း ၀ င်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်စာကိုဖတ်ပါ။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင့်မားသောအနေဖြင့်ပေးဆောင်သောကြော်ငြာကိုခွင့်မပြုပါ။
အစွန်အဖျား # 1 သတိမရကြသလော အရေးယူမှခေါ်ဆိုမှုလား? Affiliate သင့်ရဲ့အခွအေနေသင်အမြတ်အစွန်းများအတွက်တည်နေရာအရေးယူမှုတစ်ခုအစွမ်းထက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသုံးပြုလိုအပ်သည်။
ဒါပေမယ့်စောင့်ပါ။ ဤတည်နေရာမှာသင့် Affiliate link ကို post အစားတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့မြှင့်တင်ရေးဆုကြေးဇူးကိုဖန်တီးမထားပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အကြောင်းအရာအများပြည်သူရောက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤ link ကိုထုတ်ဝေနိုင်ပါတယ် အခမဲ့ Instagram ကို နှင့်မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်၌တည်၏။ ဒီ link နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များချင်သူတွေကိုအီးမေးလ်အခွင့်အလမ်းများကိုစုဆောင်းပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းအရာကဘာလဲ? အဆိုပါအကြောင်းအရာများသည်သင်၏နယ်ပယ်ပရိသတ်ကိုလေိုကွောငျးသတငျးအခကျြပါပဲ။ ပုံကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုသည်မည်မျှအပေါ်သင်မိတ်ကပ်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားပြုလျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခမဲ့လက်ဆောင်တစ်ခု။ သင်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးကိုယ်စားပြုလျှင်, အနိမ့်အဆီချက်ပြုတ်နည်းများအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤဝင်ငွေရရှိမှုနေရာများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏ Instagram ပရိသတ်ကိုခေါ်ယူပြီး၎င်းတို့ကို ဦး ဆောင်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြချက်ရှိ "ပရိုဖိုင်ထဲရှိ link ကိုနှိပ်ပါ" ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခေါ်ဆိုပါ။ ဤသည်သင်၏အမြတ်အစွန်း၏တည်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်အမြတ်အစွန်းနေရာမှအရောင်းခန်းသို့ပြောင်းပါ။ အစွန်အဖျားနံပါတ် ၄ အတွက်ဖတ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုတည်နေရာအနိုင်ရရှိတဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ပြီးနောက်, သငျသညျလုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးသငျ့ရဲ့အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေခငျြတပျကွညျ့ပါနှင့်တစ်ဦးသို့သူတို့ကိုငါလှည့် ထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်း.
သင်၏အခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလိုလားသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး သည် "အခမဲ့လက်ဆောင်ရှာဖွေသူ" ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏အဖိုးတန်ထုတ်ကုန်များအကြောင်းကိုသင်ဆက်လက်လေ့လာခြင်းမပြုလုပ်မချင်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုဘယ်တော့မျှ ၀ ယ်မည်မဟုတ်ပါ။
သူတို့လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကို Give နှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းကိုစတင်ပါ။
ရောင်းချမှုတွင်ခေါင်းဆောင်မှုကိုပေါင်းစည်းရန်အရေးကြီးသောအချက်မှာအဆင့်ဆင့်နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်တကျရှိရန်ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အထူးလျှော့စျေးများနှင့်တန်ဖိုးရှိသောဂရပ်ဖစ်များကိုထည့်သွင်းမည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ သူတို့ကိုသင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူနည်းစနစ်အသစ်သင်ပေးသည့် infographics ကိုစဉ်းစားပါ။ အမျိုးအစားဆိုသည်မှာ webinars သို့ဖိတ်ကြားခြင်း (သို့) သင်စီစဉ်သောအခြား live event များပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားရောင်းရန်ပြောင်းရွှေ့ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်၊ အချို့သူများအတွက်အလုပ်လုပ်သောအရာသည်အခြားသူများအတွက်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအလုံအလောက်အမျိုးမျိုးရှိသင့်ပါတယ် ဖမ်းယူရောင်းအား အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။
လူသားတွေဟာကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မဖြစ်လာခင်တူညီတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို 12 ကြိမ်ပျမ်းမျှစကားကိုနားထောငျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအဖန်ဖန်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထပ်ကျော့ခြင်းဖြင့်မောပန်းခံစားရပေမည်။ နားလည်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များပထမဦးဆုံးအကြိမ်စကားကိုနားမထောင်ကြဘူးကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရပေမည်။ သင့်အနေဖြင့်ဒုတိယ, တတိယသို့မဟုတ်စတုတ္ထအချိန်ကိုကြားကြပြီမဟုတ်ချင်ပါတယ်!
Instagram ပေါ်မှသင်၏“ မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်” သင့်ပုံရိပ်သည်သင့်အားရောင်းလိမ့်မည်ဟုတွေးမိခြင်း၏မှားယွင်းမှုကိုမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ၏ရည်ရွယ်ချက် Instagram ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရှုထောင့်တစ်ဦးရောင်းအားပတ်ဝန်းကျင်စေပါတယ်။ သငျသညျအထပျထသူတို့ကိုစကားပြောနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အရောင်းအစေးကိုနားထောငျပါမညျနှင့်အရောင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်။
သောအမှုမဟုတ်ပါ ခုနှစ်မှစ. , ထို့နောက်သင်ဖြစ်နိုင်သည်သူ၏အသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင်ကြပြီမဟုတ်။ channel ကိုထဲကသူတို့ကို Get လူမှုရေးကွန်ရက်များ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူ။ သူတို့ကို 'အမြတ်နေရာ' သို့ညွှန်ကြားပါ။ အမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုကိုစတင်ပါ၊ သူတို့ကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောဆိုပါ။
5 အားသုံးသပ်ခြင်းနှင့် Optimization
နောက်ဆုံးတွင်တော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် optimization ၎င်းတို့၏၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်တယ် Instagram ကိုမဟာဗျူဟာ။ သငျသညျကိုနားလည်ရမယ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းစနစ်ရှိပါသည်။ quantitative (တိုင်းတာခြင်း) နှင့်အရည်အသွေး (အဘယ်သူမျှမတိုင်းတာခြင်း) ။
သငျသညျအသီးအသီးပုံရိပ် / ထုတ်ဝေအတူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုင်းနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီထုတ်ဝေများ၏အပြန်အလှန်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ Create (သို့မဟုတ် application တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုသုံးပါ) ။
သင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအတိုင်းအတာသင့်ရဲ့ link ကိုပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ကလစ်၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကတစ်ဦးသို့လှည့်မည်မျှရှိသူများကလစ်၏တိုင်းတာရန်လိုခငျြ အလားအလာရှိသောဖောက်သည် (သင် e-mail ကိုလက်ခံရရှိ) ။ quantitative တိုင်းတာခြင်းဟာဝင်ငွေအလားအလာပြသထားတယ်။ သူတို့အားအလားအလာအသီးအသီးကိုသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ်ပိန်း (မှတ်ချက် # 4) တစ်ဦးကောင်းစမှတ်ဖြစ်တဲ့အခါလိုက်နာပါ။
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Instagram ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။ ဒါကြောင့်သင်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ထည့်နိုင်သည်ပိုဒေတာ, ပိုမိုထိရောက်သောကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေ့ကနေ့ / အချိန်
ပါဝင်မှုအမျိုးအစား - link၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုစသဖြင့်
အရည်အသွေးဆန်းစစ်နံပါတ်များထက်သင့်ရဲ့စျေးကွက်၏ရှုထောင့်ကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးဆန်းစစ်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဗေဒကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ ဤတွင်စတင်ရန်မေးခွန်းအချို့ရှိပါတယ်။
ငါအလုံအလောက်သတင်းအချက်အလက်ပေးသလား အကြှနျုပျ၏အကြောင်းအရာ (လူတွေကိုအရေးယူဖို့လုံလောက်တဲ့ဖုန်းခေါ်ပေးခြင်း), ငါ၏အားထုတ်မှုကိုထောက်ပံ့?
အကြှနျုပျ၏အခမဲ့လွန်းပလက်ဖောင်း Instagram ကိုများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်?
ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပတ်သက်။ ငါသိသမျှအရာအားလုံးပေးထားသောကြောင့်, ငါသည် "spammer" အဖြစ်ငါမြင်သလား
ဤအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုများသည်အရေးအကြီးဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်တစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ သင်ကမ်းလှမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုလုံလောက်စွာအာရုံစိုက်နေပါသလားသို့မဟုတ်သင်ငွေရှာရန်ကြိုးစားနေသလား။ ငါတို့ကိုယုံပါ။ အရောင်းဝန်ထမ်းနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသောသူတစ် ဦး အကြားခြားနားချက်ကိုလူတို့သိကြသည်။
သငျသညျမှထုတ်ပြန်သောတိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုမှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်လုံခြုံဟုခံစားရနိုင်ပါတယ် လူမှုရေးကွန်ရက်များ။ တစျဖနျအကြှနျုပျတို့ကိုခိုလှုံပါ၏။ တန်ဖိုးခေါင်းဆောင်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိကိုယ်စားပြု သာ. ကြီးရေရှည်အကျိုးအမြတ်ရရန်အချိန်ကိုယူပါ။
သင်သည်သင်၏ငွေဝင်ဘို့အ5အကြံပေးချက်များကိုဖတ်ရှု တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းကို Instagram ကိုသုံးနိုင်သည်။
analysis နှင့် optimization ။
ဤအခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်သင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယင်း၏ယှဉ်ပြိုင်အထက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တိုက်ရိုက်အရောင်းလူမှုကွန်ယက်အတွက်အမြတ်အစွန်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးသင်ပရိသတ်အတွက်အကျိုးရှိဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရပေမည်။
ကျနော်တို့သင်အသုံးပြုကူညီပေးရန် Instagram ကို Analytics မှ.
1 နညျးလမျးမြားကိုသင်ရောင်းဖို့ Instagram ကိုအသုံးပွုနိုငျ
2 Instagram ကိုရောင်းချရန်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကြံပြုချက်များ
2.23အမြတ်အစွန်း၏တည်နေရာများကိုဖော်ထုတ်
2.3 4: အရောင်းသွက်ပညာပေးနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲ
2.45အားသုံးသပ်ခြင်းနှင့် Optimization
ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 2018
တချို့လူတွေက Instagram ကိုပိုမိုနောက်လိုက်များအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများ